Dhaqaaqa Tunnel Celceliska iyo MACD iyo Calaamadaha loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah uma sahlana sida ay u muuqato jaleecada hore. Si aanad ugu dhicin xiisaha, waxaad isticmaali kartaa calaamadaha binary ee bilaashka ah, tusaale ahaan, laga bilaabo vfxAlert, ama adeegsiga wuxuu leeyahay farsamooyin iyo qalab la xaqiijiyay sida istiraatiijiyada MA Tunnel + MACD ay sameyso.
Waqtiga : Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-D1. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan kulammada ganacsiga ee Forex. Ikhtiyaarka ugu sarreeya ee boqolkiiba: Aan ka yarayn 70-75%.
Fudud (SMA), jibbaar (EMA) iyo miisaan (WMA) celcelis dhaqaaq ah oo leh muddo 10 Tilmaame muhiim ah oo lagu ogaanayo isbeddelka iyo jihada xulashada xigta. Waxaan soo jiidaneynaa dareenka ganacsatada in istiraatiijiyaddani ay tahay mid si gaar ah u socota oo aan bixinaynin calaamado laba nooc ah. Laakiin haddii dhaqdhaqaaqa dhinaca dambe u maro 25-35 dhibcood waxaad isku dayi kartaa inaad ganacsi sameyso!
MACD (12,26,9) oo leh xaddidaadyo asal ah. Isla mar ahaantaana oscillator iyo tilmaame isbeddel. Waxaa loo adeegsaday xaqiijinta kama dambaysta ah ee dhaqdhaqaaqa celceliska calaamadaha.
Jaantuska, terminaal ganacsi oo leh tilmaamayaal rakiban iyo calaamadaha ganacsiga ee ikhtiyaarrada CALL / PUT: Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa «tunnel» saddex celcelis celcelis dhaqaaq ah. Celceliska dhaqdhaqaaqa miisaanka leh wuxuu muujinayaa isbeddel caalami ah, sarreyn iyo fudud si loo muujiyo barta xulashada furitaanka. Furan kaliya marka celceliska celcelis ahaan ay gudbaan oo ay u dhawaaqaan 'dhakhso ah' MACD. Option-ku waxay ka furmayaan shumaca soo socda ka dib markii ay jabtay iyadoo uu dhacayo waqtigiisu yahay 3-5 daqiiqo. Isku halaynta calaamaddu waxay kordheysaa haddii inta badan ama dhammaan shamaca jirka uu ka sarreeyo dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa.Sida aad u arki karto, xitaa kuwa bilowga ah waa inaysan dhibaato ku qabin ganacsiga, laakiin waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in la tixgeliyo ka hor intaan la furin ikhtiyaar:
Sii deynta wararka aasaasiga ah ee aasaasiga ah "waxay hoos u dhigeysaa" caqliga tilmaamayaasha farsamooyinka iyo qaababka garaafyada badankood. Intaa waxaa dheer, marka loo eego suuqyada saamiyada iyo lacagaha, midna ma dhigi karo ikhtiyaar aan la sugin, waxaa lagama maarmaan ah in isla markiiba la falgalo waqtiga bixitaanka, taas oo ay adag tahay in farsamo ahaan iyo maskax ahaanba adag la qabto. Waxaa lagu talinayaa inta lagu jiro xilliyadan oo kale in laga fogaado suuqa. Waxaa jira calaamado badan oo ku saabsan waqtiyada yar yar intraday. Way fiicantahay inaad sugto midka soo socda ee ku saabsan isbedelka la aasaasay.
Dib udhaca labada dhinac ee Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha MACD ayaa la arkay, laakiin tani waa caadi. Gabi ahaanba waa wax aan macquul aheyn in laga saaro dib u dhaca, laakiin firfircoonidiisa qalab kasta oo farsamo waa ka duwan yahay. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la hagaajiyo tayada calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaaradi ikhtiyaaradikiisa ikhtiyaaradihiisa ikhtiyaaradi ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah dalku yeesho ku galo sida ugu macquulsan. Waxaad ka xaqiijin kartaa tan fiidiyahayaga ku saabsan istiraatiijiyada «MA Tunnel + MACD».
Waqtiga uu dhacayo. Labadaba mid aad u gaaban (1-2 daqiiqo) iyo mid aad u dheer (10-15) shuruudaha xulashooyinka ayaa loo arkaa khalad. Xaaladda kowaad, isbeddelku ma haysto waqti uu ugu aado jihada calaamadaha bilaashka ah ee bilaashka ah, kan labaadna dhaqdhaqaaqa ayaa laga yaabaa inuu dhammaado oo dib u noqosho ayaa bilaabmi doonta. Labada xaaladoodba, waxaan helnay khasaaro. Xusuusnow in kiiskeena istiraatiijiyadda loo isticmaalay in lagu nadiifiyo, waxaa fiican inaad ku sii jirto waqtiga dhicitaanka inta u dhexeysa 4-6 daqiiqo. Laakiin haddii isbeddelku xoogan yahay, waxaad ku kordhin kartaa dhicitaanka illaa 8-10 daqiiqo.
Waxaan eegeynaa waqtiga-dheer ee M5-M30 halkaasoo calaamadaha ugu horreeya ee daciifinta isbeddelka ama dib-u-noqoshadiisu muuqan karaan, taas oo markaa ay xigi doonto fal-celinta M1. Fiiro gaar ah u yeelo celceliska dhaqdhaqaaqa, waxaa jiri kara xaalado caadi ah markii aad dib uga laaban karto xeerarka xeeladaha oo aad furto ikhtiyaar!
Xusuusin muhiim ah: ka dib kacsanaan ficil ah ama isbeddello xoog leh, MACD, sida oscillators-ka kale, waxay “cagta marin karaan” muddo dheer kor ama ka hooseeya heerarka eber iyaga oo aan ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, celceliska dhaqdhaqaaqa ayaa soo saari kara calaamado wanaagsan. Si aad u furto ikhtiyaariyada xaaladaha noocaas ah ama aan ahayn, qof kastaa wuxuu go'aansadaa naftiisa, laakiin dadka bilowga ah waxaa lagula talinayaa inaysan degdegin oo ay sugaan calaamadda buuxda oo ka sii fiican iyada oo laga xaqiijinayo vfxAlert.